La Herpiniere Gite. Ukuzola kutholakele! - I-Airbnb
La Herpiniere Gite. Ukuzola kutholakele!
Chérencé-le-Roussel, Normandy, i-France
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Deborah
Indlu yasepulazini yekhulu le-18 enezici zenkathi, efakwe nezinsiza zesimanje zazo zonke izidingo zomndeni. Emaphandleni amahle anamahektha ayi-6 ezingadi ezinhle kakhulu kufaka phakathi ichibi elikhulu, indawo ekahle yeholide lokuphumula. Ukuhamba nje imizuzu emi-5 ukuya edolobheni eliseduze laseSourdeval nokufinyelela kalula ezitolo ezinkulu nezitolo zasendaweni. Isisekelo esihle sokuhlola izindawo ezikhangayo zomlando nezinhle zase-Normandy.
I-gite yokulala engu-2 inikeza ikhishi lesimanje elinazo zonke izinto zokupheka, iwasha, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, iketela, i-toaster kanye nomenzi wekhofi. Okokulala namathawula kufakiwe enanini. I-gite isethwe ngaphakathi kwendawo yabanikazi ngaphakathi kwamahektha ayi-6 wezingadi ezibunjiwe kanye nechibi elikhulu.
Hlala emaphandleni anokuthula okwamanje kungakapheli imizuzu emi-5 ukusuka edolobheni eliseduze lapho kunezitolo ezinkulu eziningi, izitolo nezindawo zokudlela. Kunezindawo eziningi ezikhangayo zasendaweni nezindawo ezinomlando phakathi kwebanga elilula lokuhamba okuhlanganisa iMont St Michel, amabhishi aseNormandy, iBayeaux, iFalaise namabhishi amahle aseningizimu yeGranville.
Abanikazi bahlala esizeni futhi bayatholakala ukuze banikeze noma yisiphi iseluleko nosizo olungase ludingeke.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$251.
Hlola ezinye izinketho ezise- Chérencé-le-Roussel namaphethelo